တန်းဆင်းဇုန်က အသင်းတွေနဲ့ဆုံတွေ့ရင် ယာဂန်ကလော့ပ် ရလဒ်မကောင်းတတ်ဘူး
တန်းဆင်းဇုန်ထဲက အသင်းတွေကို အသာမရတဲ့မှတ်တမ်းဆိုး ချိုးဖြတ်ရတော့မယ့် ယာဂန်ကလော့ပ် Jurgen Klopp
18 Oct 2018 . 5:42 PM
ပရီးမီးယားလိဂ် ရာသီအစ (၈)ပွဲမှာ (၆)ပွဲနိုင်၊ (၂)ပွဲသရေကျပြီး အမြင့်ပျံနေတဲ့ လီဗာပူးလ်အသင်း အောင်မြင်မှုအတွက် ကြိုးကြာနီပရိသတ်တွေ အကြီးအကျယ်အောင်ပွဲခံနေကြတာက သူတို့ရဲ့ပြိုင်ဘက်ပရိသတ်တွေ မျက်စိစပါးမွှေး စူးချင်စရာပါပဲ။ အခုဆိုရင် လီဗာပူးလ်အသင်းက မန်စီးတီး၊ ချယ်လ်ဆီးအသင်းတို့နဲ့ အမှတ်တူ ဂိုးကွာခြားချက်အရ တတိနေရာမှာ ရပ်တည်နေတယ်။ လာမယ့်ပွဲစဉ်တွေမှာလည်း ဟတ်ဒါဖီးလ်၊ ကာဒစ်ဖ်တို့နဲ့ ဆုံတွေ့နေလို့ လီဗာပူးလ်အသင်းအတွက် အခက်အခဲမရှိနိုင်ဘူးလို့ ထင်စရာပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ ယာဂန်ကလော့ပ် Jurgen Klopp လက်ထက် တန်းဆင်းဇုန်က (၃)သင်းနဲ့ ရင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့ မှတ်တမ်းတွေကို ပြန်ကြည့်ရင်တော့ လီဗာပူးလ်ပရိသတ်တွေ စိုးရိမ်စိတ်ဖြစ်လာနိုင်တယ်။
လီဗာပူးလ်အသင်းကို ယာဂန်ကလော့ပ် စတင်ကိုင်တွယ်ခဲ့ချိန်ကစပြီး အခုအချိန်အထိ တန်းဆင်းဇုန်ထဲက အသင်းတွေနဲ့ (၁၉)ပွဲဆုံတွေ့ခဲ့တာမှာ (၆)ပွဲပဲ အနိုင်ရခဲ့တယ်။ ၂၀၁၅၊ ဒီဇင်ဘာလတုန်းက အဆင့်(၁၉)နေရာက နယူးကာဆယ်ကို (၂-၀)ဂိုးနဲ့ ရှုံးနိမ့်ခဲ့တာကို ကြည့်ရင် လီဗာပူးလ်အသင်းအတွက် စိုးရိမ်ရမယ့်အသင်းတွေက တန်းဆင်းဇုန်အသင်းတွေဖြစ်နေတာကို အံ့အားသင့်စရာကောင်းအောင် တွေ့နိုင်ပါတယ်။
၂၀၁၇ ဆောင်းရာသီကာလတုန်းကလည်း ဆွမ်ဆီး၊ ဟားလ်စီးတီး၊ လက်စတာအသင်းတို့ကို ရှုံးနိမ့်ခဲ့ဖူးတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က တန်းဆင်းဇုန်က (၃)သင်းနဲ့ (၆)ပွဲကစားခဲ့ပြီး (၂)ပွဲပဲ အနိုင်ရခဲ့တယ်။ အခုအချိန်မှာ လီဗာပူးလ်အသင်းရဲ့ အဓိက ကစားတချို့ ဒဏ်ရာတွေကြောင့် ရာနှုန်းပြည့်ကြံ့ခိုင်မှု မရှိတာကြောင့် ယာဂန်ကလော့ပ်အတွက် စိုးရိမ်စရာပါပဲ။ အရင်ကတည်းက လီဗာပူးလ်အသင်းဟာ အသင်းငယ်တွေနဲ့ဆိုရင် မထင်မှတ်ဘဲ ရလဒ်ဆိုးတတ်တဲ့ အစဉ်အလာရှိတာကြောင့် ဒီမှတ်တမ်းဆိုးကို ယာဂန်ကလော့ပ် ချိုးဖြတ်ပြနိုင်ဖို့ လိုအပ်နေပါပြီ . .
Photo:Liverpool,Evening Standard,This Is Anfield,uk.reuters
တနျးဆငျးဇုနျထဲက အသငျးတှကေို အသာမရတဲ့မှတျတမျးဆိုး ခြိုးဖွတျရတော့မယျ့ ယာဂနျကလော့ပျ Jurgen Klopp
ပရီးမီးယားလိဂျ ရာသီအစ (၈)ပှဲမှာ (၆)ပှဲနိုငျ၊ (၂)ပှဲသရကေပြွီး အမွငျ့ပြံနတေဲ့ လီဗာပူးလျအသငျး အောငျမွငျမှုအတှကျ ကွိုးကွာနီပရိသတျတှေ အကွီးအကယျြအောငျပှဲခံနကွေတာက သူတို့ရဲ့ပွိုငျဘကျပရိသတျတှေ မကျြစိစပါးမှေး စူးခငျြစရာပါပဲ။ အခုဆိုရငျ လီဗာပူးလျအသငျးက မနျစီးတီး၊ ခယျြလျဆီးအသငျးတို့နဲ့ အမှတျတူ ဂိုးကှာခွားခကျြအရ တတိနရောမှာ ရပျတညျနတေယျ။ လာမယျ့ပှဲစဉျတှမှောလညျး ဟတျဒါဖီးလျ၊ ကာဒဈဖျတို့နဲ့ ဆုံတှနေ့လေို့ လီဗာပူးလျအသငျးအတှကျ အခကျအခဲမရှိနိုငျဘူးလို့ ထငျစရာပါပဲ။ ဒါပမေဲ့ ယာဂနျကလော့ပျ Jurgen Klopp လကျထကျ တနျးဆငျးဇုနျက (၃)သငျးနဲ့ ရငျဆိုငျခဲ့တဲ့ မှတျတမျးတှကေို ပွနျကွညျ့ရငျတော့ လီဗာပူးလျပရိသတျတှေ စိုးရိမျစိတျဖွဈလာနိုငျတယျ။
လီဗာပူးလျအသငျးကို ယာဂနျကလော့ပျ စတငျကိုငျတှယျခဲ့ခြိနျကစပွီး အခုအခြိနျအထိ တနျးဆငျးဇုနျထဲက အသငျးတှနေဲ့ (၁၉)ပှဲဆုံတှခေဲ့တာမှာ (၆)ပှဲပဲ အနိုငျရခဲ့တယျ။ ၂၀၁၅၊ ဒီဇငျဘာလတုနျးက အဆငျ့(၁၉)နရောက နယူးကာဆယျကို (၂-ဝ)ဂိုးနဲ့ ရှုံးနိမျ့ခဲ့တာကို ကွညျ့ရငျ လီဗာပူးလျအသငျးအတှကျ စိုးရိမျရမယျ့အသငျးတှကေ တနျးဆငျးဇုနျအသငျးတှဖွေဈနတောကို အံ့အားသငျ့စရာကောငျးအောငျ တှနေို့ငျပါတယျ။
၂၀၁၇ ဆောငျးရာသီကာလတုနျးကလညျး ဆှမျဆီး၊ ဟားလျစီးတီး၊ လကျစတာအသငျးတို့ကို ရှုံးနိမျ့ခဲ့ဖူးတယျ။ ပွီးခဲ့တဲ့နှဈက တနျးဆငျးဇုနျက (၃)သငျးနဲ့ (၆)ပှဲကစားခဲ့ပွီး (၂)ပှဲပဲ အနိုငျရခဲ့တယျ။ အခုအခြိနျမှာ လီဗာပူးလျအသငျးရဲ့ အဓိက ကစားတခြို့ ဒဏျရာတှကွေောငျ့ ရာနှုနျးပွညျ့ကွံ့ခိုငျမှု မရှိတာကွောငျ့ ယာဂနျကလော့ပျအတှကျ စိုးရိမျစရာပါပဲ။ အရငျကတညျးက လီဗာပူးလျအသငျးဟာ အသငျးငယျတှနေဲ့ဆိုရငျ မထငျမှတျဘဲ ရလဒျဆိုးတတျတဲ့ အစဉျအလာရှိတာကွောငျ့ ဒီမှတျတမျးဆိုးကို ယာဂနျကလော့ပျ ခြိုးဖွတျပွနိုငျဖို့ လိုအပျနပေါပွီ . .